रसेल चम्किँदा हैदरावादविरुद्ध कलकत्ताको रोमाञ्चक जित
कलकत्ता, १० चैत । आइपिएलको १२ औं संस्करणको दोस्रो खेलमा कलकत्ता नाइटराइडर्सले सनराइजर्स हैदरावादलाई ६ विकेटले हराएको छ । यो जितसँगै कलकत्ताले आइपिएलको आफ्नो पहिलो खेलमा सातौं पटक जित दर्ता गरेको छ ।
पछिल्लो पटक २०१२ मा उसले पहिलो खेल हारेको थियो । हैदरावादले दिएको १८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कलकत्ताले १९.४ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा हासिल गर्‍यो । कोलकत्ताको लागि नितिश रानाले सर्वाधिक ६८ रन जोडे । आन्द्रे रसेलले १९ बलमा ४९ रन र शुभमन गिलले १० बलमा १८ रन जोड्दै अविजित रहे ।
नितिशले आइपिएलमा आफ्नो छैटौं अर्धशतक बनाएका छन् । उनलाई रसिद खानले आउट गरे ।
यसअघि क्रिस लिन दोस्रो ओभरमा प्याभेलियन फर्किएका थिए । उनलाई शाकिब अल हसनले आउट गरेका थिए । त्यसपछि सिद्धार्थ कौलले रविन उथप्पालाई ३५ को निजी स्कोरमा बोल्ड गरिदिए । कप्तान दिनेश कार्तिक दुई रन बनाएर सन्दीप शर्माको बलमा आउट भएका थिए ।
यसअघि कलकत्ताले टस जितेर बलिङ रोजेको थियो । हैदरावादले २० ओभरमा तीन विकेट गुमाएर १८१ रन बनाएको थियो । डेभिड वार्नरले आइपिएल करिअरमा आफ्नो ३७औं अर्धशतक बनाएका थिए । उनले गौतम गम्भीरको ३६ अर्धशतकको रेकर्ड तोडिदिएका छन् । उनी ८५ रन बनाएर रसेलको बलमा आउट भए ।
विजय शंकरले आखिरी ओभरमा २४ बलमा ४० रन बनाए ।
विश्व च्याम्पियन बन्न इङल्याण्डसामु २४२ रनको लक्ष्य
विश्वकप क्रिकेट फाइनल : न्युजिल्याण्डले इङल्याण्डविरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्दै
नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया ६ रनले हार्‍यो
नेपालद्वारा मलेसियालाई १७४ रनको लक्ष्य, विनोदको अर्धशतक
मलेसियाविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाईनल खेल: कसले जित्ला त उपाधि ?
१३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) निर्धारित मितिमै आयोजना गरिने
रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदान जिदानका भाईको मृत्यु
बार्सिलोना पुगेका ग्रिजम्यानको उपाधिहरु जित्ने सपना
जेम्स रोद्रिगेज एट्लेटिको मड्रिड जाने !
कप्तान पारसको कीर्तिमानी अर्धशतकसँगै नेपालको सहज जित
मलेसियाद्वारा नेपालसामू १२९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
नेपाल भर्सेस मलेसिया, हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष प्रसारण
नेयमारका कारण ग्रिजम्यान यता न उता